iveni imidlalo ngokushesha ... noma i-PUF
Ungayifunda kanjani imidlalo ngokushesha?
Umzamo wokwenza uhlu lwamaphoyinti ezinhlamvu ukuze ufunde ukudlala umdlalo, noma ufunde ukubuka umdlalo.
Ukufunda ukubuka umdlalo wehlukile ngoba akubalulekile ukuba muhle entweni ethile ukuze ukwazi ukuqonda okwenzekayo; noma amakhono wokukhanda angahlala ethokoziswa (futhi yilokho okwenza i-hype ), okuvame ukuheha abalandeli yi- izinqubo zokucabanga ngemuva kwezinqumo zemidlalo.
Uhlu lokufunda ukuthi ungadlala kanjani
Amaphuzu ebhulethi kufanele agxile ekuhambeni komdlalo, ukuthi ungakuthola kanjani u-Y ngokwenza x. Ukugeleza kuyinto ebaluleke kunazo zonke okufanele uyiqonde ngomdlalo, imishini nolwazi kuyazungeza, kungachazwa njengejubane elibheke ekugcineni kwamagoli wokugcina ukulandelana okuvamile kokufakwayo.
Ngisebenzise igama ijubane ukusho ukuthi ukugeleza komdlalo kubukeka kufana nesigqi. Ukuqonda ukuthi kwenzeka kanjani ukufana komdlalo wevidiyo kufana nokufunda ishidi lomculo, kukhona amahla-ndenyuka, izikhathi ezisheshayo, izikhathi ezihamba kancane, i-crescendo kanye nedumela elibi ukuthula ngaphambi kwesiphepho.
Uhlu lokufunda ukuthi ungabuka kanjani
Amaphuzu ezinhlamvu kufanele agxile ezicini ezithile zomdlalo, amanye aqondiswe kohlobo oluthile, amanye aqondiswe kumdlalo. Isibonelo, ukwazisa ukungqubuzana kwe-DOTA, okubalulekile akulona iqembu elizilwayo ngokwalo, kepha i- isikhundla labadlali ngaphambi kokuthi iqembu lilwe. Imininingwane enjalo ingaziswa kakhulu futhi ikwenze uthande iqembu ukwedlula elinye, ngoba libonisa ukuzilungiselela nokuhlanganisa umdlali ngamunye adlula kukho. Umphumela wokulwa kweqembu uvame ukunqunywa isikhundla somdlali ngamunye ngaphambi kwawo.
Esitelekeni sokuphikisana ukusebenzisana nokwenza ama-setups yilokho okungabongwa, kakhulu-ke ama-frags athanda ukuphindaphinda ekusebenzeni kwabo futhi alindelwe ezingeni elithile lekhono. Izimo ze-1vX nazo zingancomeka impela ngoba ziqhamuka kumasu weqembu lapho i-2 + vX ithanda ukuba yisisekelo nje salabo, futhi ivumele isidlali sibonise ikhono laso, nezinga lokucabanga okusheshayo, futhi lezi zimo zivame ukuba ezokuqala kakhulu ngokwesikhundla sezikhundla ebalazweni.